Ngathi | I-Zhongrong Technology Corporation Co, Ltd.
I-Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd. (ikhowudi yesitokhwe: 836455), yasekwa ngo-1999 yenye yamashishini amaTshayina kaZwelonke ePhakamileyo-eTekhnoloji agxile kwi-R & D, imveliso kunye nentengiso ye-ethanol engeyiyo ingqolowa kunye neemveliso zayo ezisezantsi. Yeyona mveliso inkulu ye-ethanol engeyiyo ingqolowa e-China, kunye nomvelisi omkhulu we-acetate eMantla e-China nase-North-East China. Iimveliso zithengisiwe kwiimarike zasekhaya kunye naseAsia, kumazwe aseYurophu ngengeniso yonyaka ye-USD150 yezigidi. Inenkampani zenkxaso-mali ezimbini ngokupheleleyo, iTangshan Zhongrong Technology Co, Ltd kunye neZhangrong Technology Co., Ltd.
IZhongrong Technology Corporation Ltd. iphethe iZiko le-R & D lePhondo eli-3 kwaye ifumene ngaphezulu kweshumi elinanye lempumelelo yesayensi nethekhinoloji engaphezulu kwamanqanaba aphambili asekhaya, kunye nangaphezulu kwamalungelo awodwa omenzi wechiza angaphandle angama-42. Kuluzuko olukhulu ukuba siwenzile iNkqubo yeTotshi yeSizwe kunye neNkqubo yeSizwe yeMveliso ePhambili. Siyinkampani yokuqala e-China ukuphuhlisa i-ethanol engeyiyo ingqolowa kunye nokwenza impumelelo kunye neepatent ezinxulumene noko. Sinolawulo oluphezulu kunye neetalente zetekhnoloji kwiiyunivesithi ezininzi ezidumileyo, kwaye siye saba ngumqalisi kunye nommeli wecandelo le-ethyl ye-ethanol yase China.